Homepage | Horn Affairs Afaan Oromo
Koreen hojii raawwachiistuu ADWUI murtee dabarseen, jeequmsa, shororkeessummaa fi mankaraarsummaa amantaatin namoota himannaan irratti banamee.
KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif.
(Addisu Arega Kitesa) Karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin tibbana waamichi lagannaa gabaa guutuu Oromiyaa keessatti waamamaa.
(Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamaa Ob.Lammaa Magarsaa dhiyeenya kana waltajjii tokko irratti wayita.
Yaada kabajamoo Pir. BMNO Obbo Lammaa Magarsaa keennan Waan bu’uuraa hiiknee jirra, kan Somaalees haa.
(Betru Dibaba) Heera Mootummaa Federaalaa keewwata 93 hordofuun, ‘Heera, nageenya fi tasgabbii uummataa eegsisuuf’ Manni.
Koreen hojii raawwachiistuu ADWUI murtee dabarseen, jeequmsa, shororkeessummaa fi mankaraarsummaa amantaatin namoota himannaan irratti banamee fi adabbiin kan itti murtaa’ef himannaa adda kutuu fi dhiifamaan gadhiisun duraa duuban itti deemamaa turuun ni yaadatama. OBN odeeffannoo argateen, obbo…
KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif mari'ataa ture Ammajjii 29 Bara 2010 milkaawinaan xumuree jira. Imala jijjiiramaan haaroomsaa ADWUI gaggeessee fi kallattii kaa'e bu’ura godhachuudhaan toora biyyattiin Gama siyaasa,diinagdee…
(Addisu Arega Kitesa) Karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin tibbana waamichi lagannaa gabaa guutuu Oromiyaa keessatti waamamaa turee jira. Waamicha kana bu’ uura godhachuun aanaalee Oromiyaan qabdu 315 keessaa aanaalee 29 fi Magaalota gurguddoo 4 keessaati lagannaan gabaa taasifamaa jira.…
(Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamaa Ob.Lammaa Magarsaa dhiyeenya kana waltajjii tokko irratti wayita dubbatan akkana jedhan”Dh.D.U.O’n miseensoota miliyoona 4 qaba,kutannoon jiraannaan miseensi 400 jijjiirama ol’aanaa argamsiisuu danda’a” Ob.Lammaan dhuguma jedhan,dhugaa qabatamaan jiru dubbatan. Kallachi qabsoo Ummata…
Yaada kabajamoo Pir. BMNO Obbo Lammaa Magarsaa keennan Waan bu’uuraa hiiknee jirra, kan Somaalees haa tahu, kan Beenishangul gumuuz haa tahu kanneen kaaniis dabalatee. Maalii kan amma jiru? Oloola adda addaa lafa dabarsanii gurguranii… eebaluu fa’ii akkas godhanii,…
(Betru Dibaba) Heera Mootummaa Federaalaa keewwata 93 hordofuun, 'Heera, nageenya fi tasgabbii uummataa eegsisuuf' Manni Maree Ministeerotaa Fulbaana 28, 2009 Labsii Yeroo Ariifachiisaa kan tume ta'uun ni yaadatama. Yeroo Yeroo Ariifachiisaa kana keessatti, Dambii Onkololeessa 5, 2009 baheen,…
(Betru Dibaba) Rippabilikni Dimokiraatawa Fedaraalawa Itoophiyaa Mootummaa Federaalawaa fi Naannoleen kan caaseffame dha, Heera Federaalaa keewwata 50(1). Keewwanni kun karaa lamaan hiikamuu danda'a. Mootummaan Federaalaa fi Naannolee walitti ida'amanii (coming together) Rippabilika Dimokiraatawa Federaalawa Itoophiyaa uuman jechuu ta'uu…
(Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin wal qixa afaan hojii mootummaa Federaalaa akka hin taaneef wanti dhorku tokkollee hin jiru.Nuti Oromonni garuu gamaa gamana dhaabbannee yaada gufuu ta’u kaasuu dhiifnee Afaan keenya Afaan Saba bal’aa Afaan hojii mootummaa…
Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii 5ffaa irrattii gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2009 fi kallattii karoora hojii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 kabajamoo pirazidaantiin dhiyaate irrattii gaaffiiwwan Kabajamoo Miseensoota Caffeetiin ka’aaniif deebii Kab. Obbo Lammaa Magarsaa…
Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa argattu mana marii ministeerootaaf dhiyaate ragga’e fi mana marii bakka bu’ootaaf akka dhiyaatu murtaa’e. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa’e ifoome. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49…